နန်းတွင်း မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များရဲ့ ပုံရိပ်များ…. – Cele Oscar
နန်းတွင်း မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များရဲ့ ပုံရိပ်များ….
April 17, 2021 By L YC Celebrity
ပရိသတ်ကြီး ရေ ဒီကနေ့ Facebook ပေါ်တွင် ရေပန်းအစားဆုံး သတင်းက တော့ mandalay နန်းတွင်း မှာ ကျင်းပနေတဲ့ သင်္ကြန် ပွဲတော်တွင် အနုပညာရှင် တစ်ချို့ သွားရောက် ခဲ့ တဲ့ ဆိုတဲ့ သတင်း ပါပဲနော်။ ဓာတ်ပုံ တွေ တက်လာ တာကြောင့် ပြည်သူ များက ဒေါသ ထွက်နေ ကြပြီး ကာယကံရှင် တွေကတော့ ပြန်လည် ဖြေရှင်းခြင်း မရှိသေး ပါဘူးနော်။
အချို့ အနုပညာရှင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ထူးခြား ၊ မိုးမိုး ၊ ညီညီမောင် ( စမ်းချောင်း) ၊ မေဦးမောင် ( တော်ဝင်သူ) တို့မှာ နွေဦး တော်လှန်ရေးတွင် နေ့စဉ် ပါဝင် လှုပ်ရှားကြခဲ့သူတွေပါနော်။ ယုန်လေး ၊ ဒိန်းဒေါင် နဲ့ ရဲအောင် တို့ကတော့ အစက တည်းက စစ်တပ်ဘက် မှ ထောက်ခံကြတဲ့ သူတွေပါနော်။
အတက်နေ့ ည (၈) နာရီမှာလည်း စစ်ကောင်စီ က ကျင်းပတဲ့ သင်္ကြန်ပိတ် ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ရှစ်မိုင်မှာ ရှိတဲ့ ကုန်းမြင့်သာ ခန်းမတွင် ကျင်းပ နေပြီး ဆယ်လီတစ်ချို့မှ လာရောက် ဖျော်ဖြေ နေတယ်လို့လည်း သတင်းရရှိ ထားပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…..
ပရိသတျကွီး ရေ ဒီကနေ့ Facebook ပျေါတှငျ ရပေနျးအစားဆုံး သတငျးက တော့ mandalay နနျးတှငျး မှာ ကငျြးပနတေဲ့ သင်ျကွနျ ပှဲတျောတှငျ အနုပညာရှငျ တဈခြို့ သှားရောကျ ခဲ့ တဲ့ ဆိုတဲ့ သတငျး ပါပဲနျော။ ဓာတျပုံ တှေ တကျလာ တာကွောငျ့ ပွညျသူ မြားက ဒေါသ ထှကျနေ ကွပွီး ကာယကံရှငျ တှကေတော့ ပွနျလညျ ဖွရှေငျးခွငျး မရှိသေး ပါဘူးနျော။
အခြို့ အနုပညာရှငျတှေ ဖွဈတဲ့ ထူးခွား ၊ မိုးမိုး ၊ ညီညီမောငျ ( စမျးခြောငျး) ၊ မဦေးမောငျ ( တျောဝငျသူ) တို့မှာ နှဦေး တျောလှနျရေးတှငျ နစေ့ဉျ ပါဝငျ လှုပျရှားကွခဲ့သူတှပေါနျော။ ယုနျလေး ၊ ဒိနျးဒေါငျ နဲ့ ရဲအောငျ တို့ကတော့ အစက တညျးက စဈတပျဘကျ မှ ထောကျခံကွတဲ့ သူတှပေါနျော။
အတကျနေ့ ည (၈) နာရီမှာလညျး စဈကောငျစီ က ကငျြးပတဲ့ သင်ျကွနျပိတျ ပှဲကို ရနျကုနျမွို့ ရှဈမိုငျမှာ ရှိတဲ့ ကုနျးမွငျ့သာ ခနျးမတှငျ ကငျြးပ နပွေီး ဆယျလီတဈခြို့မှ လာရောကျ ဖြျောဖွေ နတေယျလို့လညျး သတငျးရရှိ ထားပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ…..
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ ဇာဏ်ခီ နဲ့ ခရစ္စတီနားခီ မိသားစုတို့ကို လူတစ်စုက ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရ